Wararka Maanta: Jimco, July 6 , 2018-Ra'iisal wasaarihii hore ee Pakistan Nawaz Sharif oo lagu xukumay toban sano oo xabsi ah
Jimco, July, 06, 2018 (HOL) – Maxkamad ku taalla dalka Pakistan ayaa toban sano oo xabsi ah ku xukuntay ra’iisal wasaarihii hore ee dalkaasi Nawaz Sharif, kaddib markii ay ku heshay dambi ah eedeymo musuqmaasuq.
Sidoo kale Maxkamadan ayaa waxaa ay ku xukuntay min toban san oo xarig ah gabar uu dhalay Nawaz iyo wiil uu soddog u yahay.
Dacwaddan ayaa salka ku haysay guryo qoyska Nawaz ay ku leeyihiin London oo la sheegay in lagu iibiyay lacago ay sameeyeen shirkado ka hawlgalka dibadda dalkaasi Pakistan.
Nawaz Sharif oo hadda ku sugan Britain ayaa xukunkaasi maxkamadda ku tilmaamay kuwo siyaasadeed.
Xukunkani ayaa ku soo beegmaya todobaad ka hor doorashada guud ee dalkaasi, waxaana saadaashu ay muujineysaa in xisbigiisa PML-Nawaz uu guul weyn ka soo hoyn doono doorashadaasi.
Nawaz ayaa hoggaanka xisbigaasi iska wareejiyay kaddib markii maxkamadda sare ee dalkaasi ay soo saartay xukun ah in gebi ahaanba laga mamnuuco siyaasadda.
7/6/2018 12:41 AM EST
Jicmo, July, 06, 2018 (HOL)–Dowladda Soomaaliya ayaa lagu eedeynayaa in ay ku xadgudubtay xuquuqda Aadanaha, islamarkaana mudaddii ay jirtay geysatay Xadgudubyo badan oo ka dhan ah Xuuquuqda Aadanaha.